Inkxaso yemagneti kunye noyilo olugqwesileyo lwewindows Watch yakho | Ndisuka mac
Kule veki ndithathe isigqibo sokwabelana nabafundi bam uthotho lwamanqaku ajolise kwabo bacinga ukuthenga i- Apple Watch ngale Krisimesi kwaye iyimveliso engamenzi nabani na abe krakra kwaye ukuba iza kuwe njengesipho inokukonwabisa kakhulu.
Ukuqaphela ecaleni, namhlanje ndifuna ukukubonisa inkxaso entsha yeApple Watch ehlaziyiweyo ekhulelwe nefilosofi yoyilo eyahluke mpela kuyo nayiphi na into esiyibonileyo kumnatha ukuza kuthi ga ngoku. Yinkxaso yemagnethi eyenziwe ngealuminium kwaye ngemibala yeApple Watch okwangoku iApple iyithengisile.
Enye yezinto umthengi weApple Watch ekufuneka icace gca kukuba kufuneka babenendawo ekhaya apho banokufumana khona iApple Watch ukuze iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iwele phantsi xa ikhubeka kwintambo yokutshaja. Ukuba awufuni nkxaso inkulu yekhaya lakho, namhlanje ndiyakubonisa le nkxaso incinci ngokulula Yenza intambo yokutshaja ingahambi ngokukhululekileyo kwaye ngayo unokuxelela iwotshi yakho etafileni.
Ukusebenza kwale nkxaso ngoomazibuthe kwaye kukuba yenziwe ziidiski ezimbini ezidityanisiweyo. Kwindawo ephezulu, sifumana incam yekhebula lokutshaja lokungenisa kwaye icandelo elingezantsi linokuncinwa ngetape enamacala amabini endaweni apho siza kuyibeka khona iwotshi nanini na xa sifuna ukuyitshaja kwakhona.
Nje ukuba indawo esezantsi yenkxaso ibekhona, indawo ephezulu incamathele kwincam yekhebula kwaye xa uyisondeza kwicandelo elisezantsi ithotyelwa ngoomazibuthe abanayo kwaye ngale nto iwotshi sele iqhotyoshelwe etafileni. . Ixabiso layo ngu 9,87 euro kwaye ungayifumana kwifayile ye- ukulandela ikhonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Yima ngemagneti kunye nokuma okumangalisayo kwi-Apple Watch yakho